Shiinaha Width 900-1130mm UPVC Trapezoid caaga saqafka Sheet iyo saarayaasha | JIAXING
5800mm, 11800mm ama la qaabeeyey
Ballaaran guud ahaan
Ballad waxtar leh
Awoodda Weelka Weelka
SQ.M./20 FCL (21 tan)
SQ.M./40 FCL (26 tan)
Midab Caddaan, buluug, cagaar, beige, terra-cotta cawl ama la qaabeeyey
Dammaanad Tayo 30 sano
3 lakabka Heat dahaaran Xaashida saqafka sare ee UPVC waxaa lagu soo saaray iyada oo lagu saleynayo 3 lakab tiknoolajiyad wadaag ah oo isku-dhafan oo hal-mar lagu shaqeynayo Waa qalab dhisme oo ku habboon mashaariicda dhismaha oo leh shuruudaha kuleylka. Liistada soo socota ayaa ah astaamaha astaamaha kala duwan ee walxaha lakab kasta.
Lakabka koowaad: cusbi u adkaysata cimilada ayaa loo xushay inuu yahay lakabka ugu sareeya si loo xakameeyo shucaaca shucaaca qoraxda loona yareeyo isku dheelitirka kuleylka. Waxay siisaa xaashidayada saqafka sare ee UPVC oo leh adkeysi weyn iyo iska caabbinta daxalka kiimikada;
Lakabka labaad: lakabka dhexe waa qaab-dhismeedka xumbada gaarka ah leh kuleylka iyo bandhigyada daboolka dhawaaqa.
Lakabka saddexaad: lakabka hoose ee kuleylka kuleylka ah xaashida saqafka sare ee UPVC wuxuu qaataa walxaha PVC wax laga beddelay si loogu bixiyo xoog iyo adkaanta ugu fiican.
JIAXING INDUSTRIAL GROUP CO., LTD waa soo saaraha hormuudka u ah xaashida saqafka ASA-da, xaashida saqafka UPVC, xaashida saqafka APVC, xaashida kombuyuutarka, xaashida FRP iyo darbiyada derbiyada ee Shiinaha, oo la aasaasay 1998,.
Waxay ku fadhidaa dhul ka badan 40,000 oo mitir murabac ah. In kabadan 200 oo shaqaale ah iyo 12 khadad wax soo saar oo horumarsan, 6 ayaa dhismahooda socda, waxaan soo saari karnaa 80,000 tan sanadkii.
Hore: dusha sare xaashida caaga balaastikada caaga 1070 dherer balaastig ah
Xiga: Rome Nooca ASA Sheet ResinPvc Xaashida Saqafka
T900mm UPVC sheet saqafka trapezoid caag ah
Ilaalinta UV nadiifinta polycarbonate adag is haysta ...
Cadaadiska Saameynta Sare Honey Comb Polycarbonate ...
2.5mm ASA Roma Tile Tile
polycarb sheet saqafka polycarb ...